I-R & D ejolise kwimakethi
Sibeka phambili iimfuno kunye neminqweno yentengiso ukwenza iimveliso ezihlangabezana neemfuno zakho. Siyaqhubeka nokwandisa imveliso yethu yemveliso kunye nolwakhiwo lwemveliso ngobuchwephesha bokubonelela ngezisombululo ezahlukileyo kunye nokunciphisa umjikelo wophuhliso lwemveliso. Ukuphendula ngokukhawuleza kwintengiso kunye nesisombululo esenzelwe wena sisinceda sifumane ukhuphiswano ngakumbi kwindawo yentengiso.
Uphuhliso oluqhutywa yitekhnoloji
Amalungelo obunikazi weModeli yokuSebenzisa
Amalungelo awodwa omenzi woyilo lwangaphandle
Itekhnoloji yokuhluza edibeneyo
Eyona nto yenza amava omsebenzisi amahle aye kude kunokunika into oyicelayo. Silandela injongo yokukunika amava angcono omsebenzisi ngokukunceda uphume kwingxaki yakho yemihla ngemihla engabonakaliyo. Njengoko siqhubeka sigxile kuphando kunye nokusetyenziswa kwetekhnoloji yokuhluza amanzi, siye safeza intsebenzo enkulu ngokokhuseleko lwemveliso, amava omsebenzisi kunye nexabiso lendalo.
Icebo elilodwa lomenzi lokucoca ulwelo lokumisa iteknoloji
Sigunyaze amalungelo awodwa omenzi wechiza kubuchwephesha obufana nebhodi ehlanganisiweyo yendlela yamanzi, ukhuselo lokuvuza kwamanzi, ukhuseleko lokunqongophala kwamanzi, ukutshintshwa okungafunekiyo kwefilitha, ulawulo olukrelekrele, ukukhutshwa kwe-VC, ukonga umbane, njl. Ngenkxaso yethu yezobuchwephesha, sihambisa inzuzo eyongezelelekileyo yeshishini njengemveliso kunye negama lakho liza kubonakala kwaye liqhube kakuhle kwindawo yentengiso enokhuphiswano.
Ukuze sihambisane notshintsho lwetekhnoloji, simisele ubuhlakani obunzulu neeyunivesithi ezahlukeneyo ezidumileyo ezinamava kuphando lweendaba kunye nophuhliso. Ngokwabelana ngetekhnoloji songeza amandla ethu okusinceda ukuba sizuze ngakumbi kwaye sinikezele ngexabiso elinegama kuwe. Namhlanje iTekhnoloji yeFilitha ikhule njengeShishini eliPhezulu lobuchwephesha elizwe.
Iqela le-R & D elinezixhobo ezifanelekileyo
Sineqela le-R & D elinezixhobo ezifanelekileyo kunye neenjineli ezingaphezu kwe-120. Banikezela ngesisombululo sokuhluza amanzi kwiimbono ezahlukeneyo zobungcali.
Izidingo neemfuno zakho ziza kuqala. Senza uphando lwentengiso rhoqo kwaye sisebenzisa iqonga lemveliso ye-R & D ukwenza isicwangciso semveliso ngokufanelekileyo. Sikunika imveliso eyenziwe nyulu yokuhlanjululwa kwamanzi kunye nezisombululo ukusuka kwindawo yokungena ukuya kwindawo yosetyenziso.
Ukusukela ukuzisa ubuhle kunye nokonwaba kwimveliso ngombono okhuthazayo, sikunika uyilo lwemveliso ngokusebenzisa izimvo zethu zoyilo kunye namandla okumangalisayo oyilo, ekunceda ukubamba imeko yentengiso kwaye uthengise ngcono.
Ukuze ujike umbono okhuthazayo ube yimveliso enokufikelelwa, ngokwenza ingqiqo epheleleyo yenkcazo yemveliso, senza uyilo olusengqiqweni kunye nophuhliso lokuqinisekisa ukuba imveliso iphuhliswa ngexabiso eliphantsi, ngexesha elifutshane, kodwa ikumgangatho ophezulu.
Eyona Ndlela yokuBuyisa iOsmosis, Cofa inkqubo yokuCoca amanzi, Indlu yonke yokuCoca uManzi, Umcoci wamanzi waManzi aKhuni, Hluza iCartridge, Ukutshintshwa kweFilitha yeCartridge yaManzi,